I-China ne-AU bafuna ukwethula iphrojekthi yama-pharaonic ukuxhuma izinhloko zama-Afrika - AFRIKHEPRI
I-magnesium chloride, isilwane esingaziwa esingummangaliso
Bukela ihotela iRwanda (2004)
Umlando jikelele we-Afrika (umqulu 8)
I-China, i-AU ifuna ukwethula iphrojekthi yama-pharaonic ukuxhumanisa izihloko zama-Afrika
I-China, i-AU ukwethula iphrojekthi yama-pharaonic ukuxhumanisa izihloko zamazwe ase-Afrika
Usuke usabela "IChina ne-AU bafuna ukwethula iphrojekthi ..." Imizuzwana embalwa edlule
I-African Union (AU) neChina zisayine imemorandamu yokuqonda ngoJanuwari 27 e-Addis Ababa kuphrojekthi yengqalasizinda yama-pharaonic ukuxhumanisa izihloko zamazwe ase-Afrika ngemigwaqo, izitimela ezihamba ngesivinini esikhulu kanye izinsiza zomoya.
USihlalo weKhomishini ye-AU, uMnuz Nkosazana Dlamini-Zuma, kanye nePhini likaNgqongqoshe Wezangaphandle, uNkk Zhang Ming, basebenzise lo mhlangano wokuqonda ohlanganisa nesigaba ekuthuthukisweni kwezimboni zezwekazi.
«Lo mbhalo obaluleke kakhulu owake wasayinwa yi-African Union nomlingani"Kusho uNks. Dlamini-Zuma ngemuva komcimbi obambe izinsuku ezimbalwa ngaphambi kwengqungquthela yama-24 ye-AU Heads of State and Government) ezoqala ngoLwesihlanu Januwari 30. "Kuyinto isivumelwano sekhulu leminyakaUZhang Ming uthe.
«I-Afrika liyizwekazi elikhulu lapho abantu bekufanele bahambe khona ngaphandle kokuba uhamba ngeParisUNgqongqoshe wezangqongqoshe waseChina uZhang Ming wanezela.
Le phrojekthi iyingxenye yokugcwaliseka kwe "ajenda 2063Yakha i-AU ukwakha i-Afrika ehlanganisiwe nephumelelayo ngalolo suku. Ayikho imininingwane, kodwa, ihlungile ingqalasizinda okufanele yakhiwe kanye nokuxhaswa kwephrojekthi.
Ngesikhathi sokuvakasha kwe-2014 e-Afrika, uNdunankulu waseChina u-Li Keqiang utheiphupha ukubona zonke izihloko zase-Afrika zixhunyaniswa ngezitimela eziphakeme kakhulu ukuqinisa ukuhlanganiswa kwesifunda nokuthuthukiswa". Umholi waseChina wabe esecacisa ukuthi izwe lakhe, elinokubuchwepheshe kule ndawo, "ilungele ukusebenzisana ne-Afrika ukuguqula leli phupho libe ngokoqobo".